अविवाहित लोकगायिका मुनाले यस्तो केटा मनपर्छ भनेपछि ! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
अविवाहित लोकगायिका मुनाले यस्तो केटा मनपर्छ भनेपछि !
हजारभन्दा बढी गीत गाएकी र सातवटा एल्बम निकालिसकेकी मुना थापामगरको आठौं एल्मब ‘मुटुमा बसेको माया’ भर्खरै बजारमा आएको छ । उनका फेसबुक फलोअर्स र फ्यान थुप्रै छन् । हालसम्म अविवाहित उनलाई जीवनसाथीका रुपमा कस्तो केटा मनपर्छ त ?
बानी राम्रो भएको
सबैभन्दा पहिला त बानी–व्यवहार राम्रो भएको पुरुष नै पहिलो रोजाइमा पर्छ । सबैलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो उत्तरदायित्वप्रति सचेत हुने पुरुष भए राम्रो ।
मेरो पेसा बुझ्ने हुनुपर्छ
मलाई र मेरो पेसालाई सम्मान गर्ने हुुनुपर्छ । विभिन्न कार्यक्रममा हिँडिराख्नुपर्ने भएकाले मेरो अवस्थालाई बुझ्ने हुनुपर्छ । घरमा नै हुँदा पनि मेरो समय व्यस्त नै हुने गर्छ । तसर्थ मेरो काम र पेसालाई आत्मसात गरेर साथ दिन सक्नुपर्छ ।
जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि हुन्छ
म संगीत क्षेत्रको भएकाले केटा संगीत क्षेत्रकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि फरक पर्दैन । मलाई बुझ्नु र माया गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
जातले फरक पार्दैन
कतिपय जातप्रति आस्था राख्ने जस्तो लाग्दैन । मन मिल्नु नै ठूलो कुरा हो । तर, संस्कार, संकृतिको हिसाबले चाहिँ अन्तरजातीय विवाह गर्दा सिक्न अलि समय लाग्ला । तर, समझदारी भयो भने खास ठूलो समस्या होइन भन्ने लाग्छ ।
यति नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन
अहिलेको युगमा पढाइ अनिवार्य हो । पढाइले नै जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । तर, मलाई धेरै पढेको मान्छे मात्रै ज्ञानी हुन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिलेको जमानामा पढ्दै नपढेको कोही हुँदैन नि । मेरो सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड छैन । मलाई र मेरो परिवारलाई बुझ्ने हुनुपर्छ ।
अग्लो उचाइ भएको मनपर्छ
म डल्ली छु । त्यही भएर मलाई अग्लो पुरुष मनपर्छ । वर्णले खास फरक पार्दैन । कालो वा गोरो जुनसुकै वर्ण भए पनि हुन्छ । अनि मलाई कत्तिको आँखा साह्रै मनपर्छ । यस्तो भन्ने त होइन तर हेर्दा आँखा सुन्दर होस् भन्ने लाग्छ । तर, मलाई सुन्दर लाग्ने आँखाचाहिँ खास वर्णन गर्न आएन । हेरेपछि नै थाहा हुन्छ । – गज्जब साप्ताहिक